အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အရှေ့အလယ်ပိုင်း ခရီးစတင်၊ ကိုင်ရိုသို့ ရောက်ရှိ - Yangon Media Group
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရက်စ်တီလာဆင်၏ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းခရီးစဉ် စတင်ထွက်ခွာခဲ့ရာ ပထမဆုံးနေရာအဖြစ် အီဂျစ်နိုင်ငံ ကိုင်ရိုမြို့သို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်က ရောက်ရှိခဲ့ပြီး နောက်ထပ်သွားမည့်နေရာများမှာ ဂျော်ဒန်၊ တူရကီ၊ လက်ဘနွန်နှင့် ကူဝိတ်တို့ဖြစ်ကြောင်း အီဂျစ်သတင်းဌာန MENA က ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ရက်က ဖော်ပြလိုက်ကြောင်း ဆင်ဟွာသတင်းအရ သိရသည်။ တီလာဆင်သည် အီဂျစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဆာမာရှောကရီ နှင့် တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်ပြီး အီဂျစ်-အမေရိကန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေး အရှေ့အလယ်ပိုင်း အဓိကပြဿနာများကို ပူးတွဲဖြေရှင်း ရေးကိစ္စများကို ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်သည်။
တီလာဆင်သည် အီဂျစ်သမ္မတ အဗ္ဗဒဲလ်ဖာတာအယ်လ်စီစီနှင့် တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ၂ဝ၁၈ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမေရိကန်၏ထောက်ပံ့မှုဖြင့် အလွယ်တကူလုပ်နိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ထားသည်။ မတ်လနှောင်းပိုင်းတွင်ကျင်းပမည့် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွင် စီစီမှာ ကြီးကြီးမားမားအခက်အခဲမရှိနိုင်ဟုဆိုသည်။ ဇန်နဝါရီလက အမေရိကန်ဒုသမ္မတမိုက်ပင့်စ် အရှေ့အလယ်ပိုင်းသို့ လာရောက်ပြီးနောက် ရက်စ်တီလာဆင်မှာ အမေရိကန်အဆင့် မြင့်အရာရှိတစ်ဦး ဒုတိယအကြိမ်လာရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်က ဂျေရုဆလင်အား အစ္စရေးမြို့တော်အဖြစ် ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမှ ဒေါသထွက်ခဲ့ကြသည်။
ပါလက်စတိုင်း-အစ္စရေးပဋိပက္ခမှာ အနောက်နိုင်ငံများက ထောက်ခံသည့် အစ္စရေးနိုင်ငံ ၁၉၄၈ခုနှစ်တွင် ပေါ်ပေါက်လာကတည်းက စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂက ၁၉၆၇ခုနှစ် နယ်ခြားကိုအတည်ပြု၍ အာရပ်- အစ္စရေး နှစ်နိုင်ငံဖော်ဆောင်ရန် အဆိုပြုပြီးနောက် ပါလက်စတိုင်း တို့က အရှေ့ဂျေရုဆလင်အား ¤င်းတို့၏မြို့တော်အဖြစ်သတ်မှတ်ရန် လျာထားခဲ့ကြသည်။
ကောက်ရသည့် ဗုံးသီးဟောင်းကို ကလေးတစ်ဦး ဆော့ကစားရာမှ နေပြည်တော်တွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား၊ န??
လုပ်ငန်းအကျပ်အတည်း များရှိလာသောကြောင့် ပုလဲပရဟိတဖောင်ဒေးရှင်းမှ လူသစ်များ အောက်ဆီဂျင်အိ??